iPhone 12 Pro Max Model Isa A2342, A2410, A2411, A2412 - Fitaovana
iPhone 12 Pro Max Model Isa A2342, A2410, A2411, A2412
Vao haingana i Apple no nanangana ny laharana farany iPhone namboariny tamin'ny alàlan'ny hetsika Hi-Speed. Ny hetsika 13 Oktobra dia nanome anay ny fanampin'ilay andiany. Misy iPhones vaovao efatra misy eny an-tsena. Afaka mahita kinova samihafa amin'ny telefaona mitovy amin'ny tsena ianao amin'izao fotoana izao. Amin'ity toro-lalana ity dia manarona ny iPhone 12 Pro Max izahay. Izy io no telefaona voalohany amin'ny taona 2020 miaraka amin'ny lakolosy sy siotsiôna rehetra.
Ny vidiny dia manomboka amin'ny $ 1099 ka hatramin'ny $ 1399. Ny maodelin'ny sahan'i Apple dia manana karazany samihafa manerana an'izao tontolo izao. Amin'ity torolàlana ity dia miresaka momba ny maodely A2342, A2410, A2411, A2412 izahay.
Endri-javatra ny iPhone 12 Pro Max:
Ny iPhone Pro Max dia misy fiasa mahafinaritra sasany. Izy io dia mitondra kalitao sy fahamendrehana amin'ny fampiasanao smartphone. Amporisihinay ny mpamaky rehetra izay manana ny teti-bola. Andao hodinihintsika ireo tombontsoa tena tsara azo avy amin'ny fampiasana ny iPhone 12 Pro Max.
1. efijery malalaka
Ny Pro Max dia miaraka amin'ny efijery 6.7 ', izay mety indrindra ho an'ireo olona maniry efijery lehibe kokoa. Manana habaka efijery an-taonina azo ampiasaina izy io.
2. Fametrahana fakan-tsary telo
Ireo fakan-tsary telo ao aoriana dia mahavidy azy. Ny fitaovana Apple dia fantatra amin'ny alàlan'ny sensor avo lenta. Azonao atao ny manindry sary manaitra amin'ny alàlan'ity tranonkala ity. Izy io koa dia mitondra stabilisation sary optika. Ny solomaso telephoto dia mety tsara amin'ny fampiasana anao.
Fanampiny lehibe ho an'ny laharana iPhone dia ny teknolojia MagSafe. Mahasoa izy io amin'ny famerana mora. Afaka mahita valiny eo noho eo ianao amin'ny alàlan'ity teknolojia ity.
4. Fifandraisana 5G
Ny teknolojia farany 5G farany izao dia ho azo ampiasaina amin'ny fomba mahomby. Apple dia miasa mankany amin'ny fanatanterahana ny traikefa SIM vaovao.
Apple dia mbola mandeha eo alohan'izay asehon'izy ireo ihany. Afaka mahazo fidirana amin'ny fampisehoana Super Retina XDR ny mpampiasa. Kely kokoa ny bezel, ary afaka miaina ilay fampisehoana mazava toy ny kristaly ianao.
Nisy fanavaozana ankapobeny tamin'ny famolavolana ny fitaovana ihany koa. Afaka mahita tombontsoa avy hatrany ianao rehefa manavao avy amin'ny taranaka vitsivitsy talohan'izay. Ireo no fanampiana mahazatra isaky ny fanontana iPhone.
Modely iPhone 12 Pro Max:
Ny iPhone 12 Pro Max dia misy isa maromaro. Ireo dia hanampy anao amin'ny famantarana ny toerana. Afaka mahazo kinova manokana ianao arakaraka ny toerana misy anao manerantany. Ireo kinova ireo dia mitovy amin'ny bika aman'endriny. Misy fiovana vitsivitsy monja amin'ny firafitry ny fitaovana anatiny. Ireto ny fisarahana am-pahendrena an'ireo faritra iPhone ireo.
Ao amin'ny tsenan'i Etazonia ihany no amidy ilay kinova. Afaka mividy izany ny mpampiasa amin'ny fivarotana paoma ofisialy na tranokala an-tserasera. Io no maodely tsara indrindra ho an'ireo mpankafy tambajotra.
Mahazo miditra amin'ny tamba-jotra 5G haingana indrindra amin'ity modely ity ny mpampiasa. Ny rafitra mmWave dia aleony amin'ny fifandraisana haingana.Afaka mahita fahasamihafana kely amin'ny endrika ivelany ihany koa ireo mpampiasa. Ny antena ho an'ny tambajotra dia misy dikany kokoa amin'ity fitaovana ity.
Ny maodely A2410 dia tsy misy afa-tsy any Canada sy Japon ihany. Miavaka ny firenena roa tonta raha ny fenitra fiarovana ny olom-pireneny.
Ny telefaona dia hanohana ihany koa SIM roa amin'ny alàlan'ity maodely ity. Izy io dia miaraka amin'ny serivisy e-SIM. Eo ihany koa ny fahafaha-manao 5G, saingy tsy mitovy amin'ny maodely USA.
Io ilay kinova izay amidy saika manerana an'izao tontolo izao. Azo antsoina hoe kinova iraisam-pirenena an'ny fitaovana iPhone 12 Pro Max izy io. Firenena mihoatra ny 100 + no hahazo ny fidirana amin'ity kinova Apple ity. Tena mitovy amin'ny kinova A2310 izy io.
Izy io koa dia miaraka amin'ny fahaiza-manao sim roa. Afaka mampiasa nano-sim sy e-sim amin'ny fitaovana ianao.
Hitan'ny mpampiasa fa malaza eto Hong Kong, Sina ary Macau ity kinova ity. Ny faritra atsinanan'i Azia dia manana famerana miavaka. Apple dia marika iraisam-pirenena izay te-ho mora idirana na aiza na aiza.
Any amin'ireo faritra ireo ihany no anolorany fitaovana tokana. Zava-misy isan'andro ny famerana ny Internet any amin'ny tanibe Shina. Mila ferana ny ankamaroan'ny fampiharana tandrefana. Ny telefaona koa dia manohana karatra sim nano roa.
Ireo modely samihafa amin'ny iPhone 12 Max Pro dia mety tsara amin'ny fampiasanao mora. Ilaina izany ho an'ireo mpampiasa izay te hahazo ny fitaovana Apple farany. Manantena izahay fa afaka nanome anao ny mombamomba ireo kinova samihafa ny mpitari-dalana anay.
App Netflix ho an'ny Mac - Azo atao ve izany?
sarimihetsika maimaim-poana nefa tsy misintona
stream pc mankany chromecast amin'ny fahitalavitra
mandra-pahoviana ny mpikamban'ny fitsarana maimaim-poana amin'ny amazona
kaody fanomezana fanomezana mivantana xbox maimaim-poana
ny fomba fandefasana sarimihetsika manomboka amin'ny pc ka hatramin'ny chromecast
mametraka Android tv os amin'ny boaty android